फरक भूमि र परिवेशमा आईपीएल : १३औं संस्करण शनिबारदेखि- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
फरक भूमि र परिवेशमा आईपीएल : १३औं संस्करण शनिबारदेखि
काठमाडौँ — अन्ततः हुने नहुने दोधारबीच यसपल्टको इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल २०२०) आज शनिबारदेखि सुरू हुँदै छ । त्यो पनि यूएईमा । भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी रोकिने कुनै छाँटकाँट छैन, बरू उल्टै बढ्दै छ । यस्तोमा प्रतियोगिताको १३ औं संस्करण हुँदै छ, विदेशी भूमिमा । त्यो पनि खालि तीन सहरमा ।
यस्तोमा यसपल्टको प्रतियोगिता पूर्णतः फरक हुनेछ, सर्वथा भिन्न । यसबीच एउटा तथ्य के निश्चित छ भने विश्वकै सबैभन्दा धनी यो क्रिकेट लिगले अब्बल दर्जाको क्रिकेट भने पस्कने छ । समाचार एजेन्सीहरुको सहयोगमा तयार पारिएको रिपोर्ट :
स्पिनरको आईपीएल २०२०
फेब्रुअरीतिर जतिबेला भारतलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीले छोप्नै लागेको थियो, त्यतिबेला इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) का लागि एउटा योजना सारिएको थियो । पूरा प्रतियोगिता एउटै सहरमै गर्ने र त्यसका लागि तीन मैदानको प्रयोग गर्ने । त्यतिबेला यसलाई कसले पनि निको मानेनन् । बरू धेरैले भनेका थिए, के यस्तो हुनसक्छ र ? आखिरमा आईपीएलका फ्रेन्चाइजले आफ्नो घरेलु र विपक्षी टिमको मैदान हेरेर टिम बनाएका थिए ।
प्रायः टिमको योजना थियो, घरमा हुने सात खेलमा सक्दो बढी अंक बटुल्ने । तर अहिले स्थिति कस्तो छ भने पूरा प्रतियोगिता अर्कै देशमा सारिएको छ । त्यो पनि सर्वथा नयाँ परिस्थितिमा । यस्तोमा केही टिमलाई घाटा हुन सक्नेछ, केहीलाई फाइदा । केही टिमले नयाँ परिस्थितिअनुसार आफूलाई सजिलै फेर्ने छन्, केहीले यो काम फिटिक्कै गर्नसक्ने पनि छैनन् । यसपल्ट ठ्याक्कै फरक हुने के हो भने कसैलाई पनि ‘होम एडभान्टेज’ हुने छैन ।
खाली कतिसम्म भने केही टिमले होटल नजिकको मैदानबाट खेल्न पाउनेछन् र त्यही मैदानमा बढी खेल खेल्नेछन् । त्यसैले यो आफैंमा घरको मैदान हुन सक्नेछ । जस्तो, रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोर, दिल्ली क्यापिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, किंग्स इलेभेन पन्जाब र राजस्थान रोयल्सले लिग चरणमा आफ्ना आधाभन्दा बढी खेल दुबईमा खेल्नेछ । बाँकी दुई टिमले भने अबुधाबीमा सक्दो बढी खेल्ने अवसर पाउने छ ।
सुरुमा सबै टिम आफ्ना खेलाडीलाई स्थानीय वातावरण, मौसम, पिच आदिसँग अभ्यस्त गराउन व्यस्त रहनेछ । दुबई र अबुधाबीभन्दा फरक मैदानका रूपमा रहेका शारजहाँले भने आठै टिमका तीन तीन खेलका आयोजना गर्नेछ । यो पूरा प्रतियोगिताका लागि ‘गेम चेन्जर्स’ पनि हुनसक्छ । महत्त्वपूर्ण तथ्य पिचको व्यवहार कस्तो हुनेछ त ? यसको पहिलो सिधा जवाफ हो, यूएईमा स्पिनरलाई बढी सफलता मिल्ने गर्छ, त्यसैले आईपीएल २०२० स्पिनरको प्रतियोगिता हुनेछ ।
तर, सबै त्यति सजिलो छैन । यूएईमा फेब्रुअरीदेखि मार्च क्रिकेटको खास सिजन हो । अक्टोबर–नोभेम्बरमा तिनै मैदानमा क्रिकेट हुँदा पिचको स्वरूप फरक हुनसक्छ । जम्माजम्मी ४० दिनको अन्तरमा दुबईको पिचमा २४ खेल हुनेछ । प्रतियोगिताको अन्त्य अन्त्यतिर पुग्दा पिच कस्तो भइसक्ने होला ? अहिलेका लागि खाली अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ । रन बनाउन सजिलो हुने छैन, जति रन आउने छ, त्यो पनि सुस्त गतिले आउने छ ।
त्यसले यसपल्टको आईपीएल २०२० मा टस कसले जित्नेछ, त्यसको ठूलो अर्थ हुनेछ । पहिले ब्याटिङ गरेको टिमले तयार पारेको लक्ष्य उसले रक्षा गर्नसक्ने सम्भावना बढी हुनेछ । त्यसैले जसले टस जित्यो, उसले पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय बढीभन्दा बढी हुनेछ । त्यसैले टस जित्नुको अर्थ त्यही टिमले खेल जित्ने सम्भावना बढी हुनु हो, जितको प्रतिशत बढ्नु हो । यूएईमा पछिल्लो समय भएका घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय खेलको तथ्यांकले यही देखाउँछ ।
अझ त्यसमाथि अधिकांश खेल साँझ सुरु भएर रातितिर सकिने छन् । त्यसैले टस जित्नु अझ महत्त्वपूर्ण हुनेछ । पहिलो इनिङ्समा पिचको व्यवहार जस्तो छ, त्यसपछिको इनिङ्समा पिचले त्यस्तै काम गर्नेछ भन्न सकिन्न । त्यसैले अत्यधिक सम्भावना के छ भने यसपल्टको प्रतियोगितामा तीन शब्द खुब चल्नेछ । यो हो– स्पिन, स्पिन र स्पिन । यूएईका यी क्रिकेट मैदानमा यसअघि पाकिस्तानी सुपर लिग (पीएसएल) पनि भइसकेको छ ।
त्यसमा स्पिनर त निर्णायक साबित भएका छन् नै, केही बायाँहाते तीव्र गतिका बलर पनि घातक साबित भएका छन् । त्यसै पनि भारतीय क्रिकेट स्पिन आक्रमणमा बढी निर्भर हुने गर्छ । त्यसैले जसको स्पिन आक्रमण बलियो छ, त्यो टिमको जित सम्भावना यसपल्ट बढी छ । यी त भए सबै अनुमान । भलै, यी सबैका लागि पुराना तथ्यांककै मदत लिइएको छ । खाली एउटै तथ्यमात्र निश्चित छ, यसपल्टको आईपीएल २०२० यसअघिका संस्करणभन्दा धेरै अर्थमा फरक हुनेछ ।
कस्ता छन् त टिम ?
मुम्बई इन्डियन्ससँग निकै बलियो सुरुआती ११ छ । यी सबै स्थानमा प्रयोग गर्न मिल्ने वैकल्पिक खेलाडी पनि कमी छैन । भारतीय टिमका पाँच खेलाडी अहिलेको मुम्बई टिममा छन् । यसले टिमको स्वरुप बलियो देखाउँछ । समस्या यहींनिर हुनसक्छ, किनभने पूरा टिममा खासै धेरै अनुभवी खेलाडी कोही पनि छैनन् ।
जसप्रित बुमराहलाई केही अप्ठ्यारो भयो भने तीव्र बलिङ आक्रमणमा समस्या हुन सक्छ । तर सम्झौं, मुम्बई आईपीएल इतिहासकै सबैभन्दा सफल दुई टिममध्ये एक हो ।
आईपीएलको अर्को सफल टिम हो, चेन्नई सुपर किंग्स । अनि यो टिमसँग जति प्रतियोगिताको अनुभव बिरलै होला । अझ यो टिमको सबैभन्दा ठूलो अस्त्र भनेकै खारिएका खेलाडी हुन् । यो टिम धेरैभन्दा धेरै स्पिन आक्रमणमा टिकेको हुन्छ । यसमा तलमाथि भयो भने के गर्ने ? दोस्रो उपाय नहुन सक्छ ।
टिमको प्रदर्शन धेरै हदसम्म शेन वाट्सनको टिक्न सक्छ, तर केही प्रमुख खेलाडीले नखेल्ने निर्णय गरेको हुनाले यसले टिम समीकरणमा फरक पारेको छ ।
रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोर
आधुनिक ट्वान्टी–२० टिम कस्तो हुनुपर्छ, रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरलाई हेर्नुपर्छ । समस्या के भने यो टिमले अहिलेसम्म उपाधि भने जित्न सकेको छैन । अहिलेको टिमका केही खेलाडीको नाम लिने बित्तिकै त्यो विपक्षी टिमका लागि दबाब सिर्जना गर्न पर्याप्त छ ।
जस्तो, विराट कोहली, आरोन फिन्च, एबी डी भिलियर्स आदि आदि । जस्तै ठूला नाम भए पनि खेलको अन्त्यतिर निर्णायक प्रदर्शन गर्ने खेलाडीको टड्कारो अभाव छ, यो स्टारसम्मिलित बेंग्लोर टिममा ।
कम्तीमा कागजमा निकै बलियो टिम हो, दिल्ली क्यापिटल्स । यसका अधिकांश घरेलु खेलाडी त्यस्ता छन्, जसले अबको केही वर्षमा भारतीय टिमका लागि आधार साबित गर्न सक्नेछन् । लगभग युवा टिमभन्दा हुन्छ, दिल्लीलाई ।
दिल्लीको भाग्यमा पनि अहिलेसम्म उपाधि लेखिएको छैन । सिमरन हेटमायर टिमका सबैभन्दा ठूलो अस्त्र हुन सक्छन् । तर टिमको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेकै स्पिन आक्रमण हो । अनि प्रमुख समस्या, फेर एकपल्ट डेथ बलिङ ।
राजस्थान रोयल्समा जत्तिका स्थापित चार प्रमुख विदेशी खेलाडी अन्यत्र कहीं छैनन् । यसमा सबैभन्दा अगाडि त बेन स्टोक्स नै छन् । उनी एक्लै कुनै पनि समय खेल आफ्नो पक्षमा पल्टाउन सक्षम छन् । पछिल्लो समय इंग्ल्यान्डका लागि उनले धेरैपल्ट यो काम गरिसकेका छन् ।
तर समस्या के हुनसक्छ भने उनको अनुपस्थिति भएमा यस्तै भूमिका टिमका लागि कसले खेल्छ त ? रोबिन उत्थपा आफ्नो खेलजीवनको लगभग अन्त्यतिर छन् र उनले त्यसको भरपूर फाइदा उठाउनुपर्छ ।
ठूला प्रतियोगितामा अनुभवी खेलाडीको धेरै आवश्यकता हुन्छ । यो तथ्यमा कोलकाता नाइट राइडर्सले माथ खान बेर छैन । हुन पनि दिनेश कार्तिकलाई छाडेर टिममा बाक्लो अनुभव भएका खेलाडी नै छैनभन्दा हुन्छ ।
त्यसो त आन्द्रे रसेल उत्तिकै अनुभवी खेलाडी हुन् । तर, समस्या के छ भने चोट रसेलको खेलजीवनको अर्को पर्यायजस्तै हो । टिम पक्कै युवा छ, त्यसैले कोलकाताले यसलाई बलियो पक्ष मानेर आफ्नो मुख्य रणनीति बनाउन सक्छ ।
किंग्स इलेभेन पन्जाब
जति ठूला नाम, उत्तिकै लामो ब्याटिङक्रम । यही सबैभन्दा ठूलो विशेषता हो, किंग्स इलेभेन पन्जाबको । जस्तो, केएल राहुल, मायंक अग्रवाल, क्रिस गेल, ग्लेन म्याक्सवेल, अनि निकालेस पूरन ।
यसपल्ट पन्जाबको यो ब्याटिङक्रम चल्ने हो भने यसलाई रोक्न विपक्षी टिमलाई पक्कै गाह्रो हुनेछ । टिमसँग मोहम्मद सामीका रूपमा तीव्र बलिङ अस्त्र पनि छ । टिमको प्रदर्शन धेरै हदसम्म राहुलको निर्णयमा भर गर्नेछ । प्रश्न हो, उनी कत्तिको परिपक्व देखिने छन् त ?
आधुनिक क्रिकेटकै सबैभन्दा आक्रामक ब्याट्सम्यानका रूपमा सनराइजर्स हैदराबादसँग छ, डेविड वार्नर । उनी कप्तान त हुन नै । उनी कुनै पनि समय टिमलाई आक्रामक सुरुआत दिन सक्षम छन् । उनलाई जोनी बेरिस्टोले साथ दिन सक्छन् र यसलाई ट्वान्टी–२० क्रिकेटमा सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रारम्भिक ब्याटिङ जोडी मानिन्छ ।
त्यसलगत्तै केन विलियम्सन छन् । तर टिमसँग उत्तिकै बलियो मान्न सकिने बलिङ आक्रमण भने छैन र यसले समस्या सिर्जना गर्न सक्छ ।
दुबई अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियम सहरको बाहिरी भागमा छ । यो यूएईको सबैभन्दा ठूलो रंगशाला हो । यसमा उपलब्ध सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका छन् । रंगशालाबाट पाँच मिनेटको दूरीमा आईसीसीको एकेडेमी छ । मुख्य खेल मैदानको छेउछाउ अभ्यास पिच उपलब्ध छैन, तर एकेडेमीमा यही कामका लागि भनेर ३८ पिच उपलब्ध छन् ।
अहिलेसम्मको तथ्य विश्लेषण गर्ने हो भने दुबईको पिचले स्पिनरलाई मदत गर्ने निश्चित छ । भलै, सुरुआती दिनमा यो ब्याट्सम्यानलाई सहयोग गर्ने ‘फ्ल्याट पिच’ थियो ।
शेख जायेद क्रिकेट स्टेडियम सन् २००६ मा मात्र निर्माण गरिएको हो । यसको आकार लगभग ‘ओभल सेप’ मा छ । यो विश्वकै सबैभन्दा ठूला क्रिकेट मैदानमध्ये एक हो । यहाँ नेटमा अभ्यासका लागि २४ टर्फ उपलब्ध छन् । सहरबाट केही टाढा रहेको हुनाले यहाँ भीडको पनि कुनै समस्या हुने छैन ।
तर यसलाई ट्वान्टी–२० क्रिकेटका लागि उपयुक्त रंगशाला भने मानिन्न । यहाँ बिरलै मात्र चौका र छक्काको वर्षा देखिने छ । त्यसैले यहाँ ठूला स्कोर बिरलै बन्छ, ब्याट्सम्यानले यहाँको पिचमा कडा संघर्ष गर्नुपरेको छ ।
सन् १९८२ मा स्थापिन गरिएको शारजहाँ क्रिकेट स्टेडियमलाई धेरै अर्थमा ऐतिहासिक मान्न सकिन्छ । भारतीय क्रिकेटका सन् ९० का धेरै कथा यस रंगशालासँग जोडिएका छन् । पछिल्लो समय यहाँका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा धेरै काम भएको छ ।
यससँगै सुविधा पनि थप गरिएको छ । यो सहरको मध्य भागमा छ, त्यसैले खेलाडी र आयोजकले धेरै सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्नेछ । जहाँसम्म पिचको प्रश्न छ, यो ‘फ्ल्याट’ हुने गर्छ, त्यसैले यो ब्याट्सम्यानका लागि स्वर्ग हुन सक्नेछ ।
नीता अम्बानी हुन्, मुम्बई इन्डियन्स लिगकी मालिक । केही समयअघि जारी गरेको १० प्रभावशाली महिला खेल व्यक्तित्वमा उनको पनि नाम परेको थियो । त्यो सूचीमा परेका अन्य दुई चर्चित नाम हुन्, टेनिसकी सेरेना विलियम्स र जिम्न्यास्टिककी सिमोनी बाइल्स । स्पोर्ट्स बिजनेस नेटवर्क ‘आईस्पोर्टकनेक्ट’ ले यो सूची जारी गरेको हो ।
यो संस्थाले भनेको छ, ‘नीताले मुम्बई इन्डियन्स फ्रेन्चाइज टिमको नेतृत्व गरिरहेकी छन् । यो इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएलको सर्वाधिक सफल टिम हो । त्यसबाहेक नीता भारतका अन्य खेल गतिविधिमा पनि सहभागी छिन् ।’
नीता भारतका सर्वाधिक धनी व्यापारी मुकेश अम्बानीकी पत्नी हुन् । सन् २०१४ यता उनी रिलायन्स इन्डस्ट्रिजको बोर्डमा पनि छिन् । उनको मुम्बईले अहिलेसम्म चारपल्ट आईपीएलको उपाधि जितेको छ र यो टिम प्रतियोगिताको डिफेन्डिङ च्याम्पियन हो । नीता मुम्बई टिमको अभ्यासदेखि खेलका क्रममा प्रत्यक्ष सहभागी हुने गर्छिन् ।
प्रकाशित : आश्विन ३, २०७७ १०:५०
काठमाडौँ — नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफ्नो पुनर्नियुक्तिको माग गर्दै केही दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेको प्रदर्शनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
नेपाल सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा दिएको जिम्मेवारी आफूले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको पनि घिसिङले बताएका छन् । ‘प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्वको निरन्तरता वा परिवर्तन नियमित एवं स्वाभाविक प्रक्रिया भएकाले यसलाई हामी सबैले आत्मसाथ गर्नै पर्छ ।प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारमा निहित भएकाले यस विषयमा उपयुक्त समयमा आवश्यक निर्णय हुने नै छ ।’ शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घिसिङले भनेका छन् ।
कोभिड—१९ संक्रमणको जोखिम भइरहेका बेला आफूलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तरता दिनु पर्ने माग राख्दै महामारीको संवेदनशील अवस्थामा सडकमा भीडभाड गरी प्रदर्शन नगरिदिन पनि घिसिङले अनुरोध गरेका छन् ।
प्रकाशित : आश्विन ३, २०७७ १०:२५